आऊ साथी नारी दिवस खोज्न निस्कौं | eAdarsha.com
आऊ साथी नारी दिवस खोज्न निस्कौं
१ सय ११ वर्ष पहिलेबाट आजकै दिन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस आजकै दिन हो भनेर सार्वजनिक नगरिएको भए सायद आज नेपालमा यो दिवस हो भनेर कुनै पनि क्यालेन्डरमा तोकिने थिएन होला । यदि तिथि मितिका आधारमा तोकिन्थ्यो भने नेपालमा नारी दिवस यो वर्षको लागि हराउने थियो । अनि हामी केही महिलाहरुलाई लाग्थ्यो पनि होला यो वर्ष नारी दिवस आउँदै छ कि गइसक्यो ? अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डरले आज देखायो तर नेपाली माटोमा नदेखेकाले यो गुनासो मात्रै हो व्यक्ति गर्न खोजेको ।
देशको सबैभन्दा सर्वोच्च पदमा महिला नै हुनुुहुन्छ तर पनि लाग्दैन आज के दिवस हो भन्ने कुराको उहाँलाई हेक्का छ । उहाँलाई त लाग्दै छ सायद यही कुराले निद्रा पनि लागेन कि चैनले निदाउनु भयो कुन्नि हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण । अब के हुन्छ आफू रहन्छु कि रहन्न अनि आफ्नो समूह र कोटरीको हित र सर्वोपरिका कुरा । यसो भनिरहँदा देशकै सर्वोच्च पदको अपमान र आलोचना गर्न खोजेको भने पटक्कै होइन । यो एक आम नागरिक र त्योभन्दा पनि बढी महिला भएर महिलाकै बारेमा किन नसोचेको होला भन्ने गुनासो मात्रै हो ।
एउटै कामना मात्रै गर्न सक्छु आजकै दिन कोही पनि नारी बलात्कार, अपहेलना र पीडामा नपरुन्
अमेरिका र अन्य मुलुकका महिलाहरुले पनि मैले जसरिनै सोचे कि के गरे होलान् आफ्नो देशका सरकार र सरोकारवालालाई ? रातभरि यही विषयमा सोच्दासोच्दै हैरान भएँ अनि लेख्न सुरु गरें नारी दिवस खोज्ने १ असफल प्रयास । अहँ कतै भेटिएन एक शब्द पनि । नेपाली परिवेशमा शब्दवाहेक अरु कुराको अपेक्षा र त छँदै छैन तर आज त्यही शब्द पनि भेटिएन र सुनिएन कतै पनि ।
गएको चुनावमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको दौडमा होमिएकी वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले अन्तिममा अमेरिकाकै राष्ट्रपतिको दौडमा रहेका अर्का प्रत्यासी जो वाइडेनलाई समर्थन गर्दै आफू उपराष्ट्रपतिको पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिन् । त्यसपछि कमलाको चर्चा एकाएक चुलियो । नतिजा पनि अपेक्षित नै भयो । जब उनी पहिलो पटक ह्वाइटहाउस प्रवेश गरिन् विश्वको ध्यान उनमा केन्द्रित थियो अब विश्वमा महिला सामर्थ र समानता ठूलै उथलपुथल हुन्छ । उनको पहिलो सार्वजनिक भाषणले पनि संसारका महिलाहरुमा एक खालको तरंग नै ल्यायो ।
उनले भनिन्, ‘हो म पहिलो महिला हुँ तर अन्तिम भने होइन । हामी शिक्षा, समानता र महिला सशक्तिकरणका लागि लडिरहने छौं । अमेरिकाको डेलाबेरमा उनको पहिलो भाषण सुनेपछि संसारभरका महिलाहरुमा निकै ऊर्जा थपएिको थियो । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतबाटै आप्रवासी नागरिकका रुपमा अमेरिकाको त्यति ठूलो पदमा पुग्दा नेपाली महिलाहरुमा पनि फरक तरंग आउनु स्वभाविकनै थियो । चाहेर पनि नचाहेर पनि संसारले स्कीारेरको छ अमेरिकाले जे गर्छ त्यो कुराले विश्व राजनीतिर समाजमा त्यसको प्रभाव पर्छ ।
प्रसंग महिला सुरक्षा, सम्मान र रोजगारीकै हो, आज १ सय ११ औं नारी दिवस हो रे । नेपालले पनि यसलाई धूमधामले मनाएको छ रे । आजको नारा पनि ‘महिला सुरक्षा, सम्मानः समृद्ध नेपालको आधार’ हो रे । नेपालले नारी दिवसको अवसरमा लिएको लक्ष्यलाई सिंहदरवार, बालुवाटार र शीतल निवासले नै कुरीकुरी भनिरहेको छ । एउटै कामना मात्रै गर्न सक्छु आजकै दिन कोही पनि नारी बलात्कार, अपहेलना र पीडामा नपरुन् । त्यसो त आज मैले यो विषयलाई उठाउन खोजेकी होइन । लक्ष्यलाई कार्यन्वयन सँगै निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरोकारलालावाट के कति काम भए भन्ने कुरालाई उठाउन खोजेकी हुँ ।
कार्यक्रममैपिच्छे फरक फरक विषयमा समूहको मनोभाव बुझ्दै तालीका लागि भाषण गर्न खप्पिस सरकार प्रमुख पनि कति निरीह के ? महिला सशक्तीकरणका लागि एउटा पनि उखान नआएकै हो र ? जोक्स र उखानै सही माहोल त बन्थ्यो होला नि १ दिन भए पनि । त्यसो त देश र जनता अनि विधिका लागि सडकमा आएका राजनीतिक दलहरु पनि समावेशी हुन सकेका छैनन् । सत्ताशीन नेकपामै पनि यो लागु हुन सकेको छैन ।
आफूलाई सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक भन्न पछि नपर्ने नेपाली कांग्रेसले पनि महिला अधिकारका कुरालाई कति चाँडो बिर्सेको होला है । कहीँ कतै एक शब्द पनि छैन । आज सबैको एउटै बोली छ अब देशको राजनीतिमा कसको वहुमत पुग्छ र सरकार बनाउने ? राजनीतिक दलहरुले किन नबुझेका होलान् एक माघले जाडो जाँदैन भन्ने कुरा । उनीहरुको अहिलेको अवस्था हेर्दा लाग्छ संसारले मनाएको नारी दिवस नेपालमा मात्रै किन मनाइएन होला, उसको उत्तर पनि सहजै जस्तो लाग्यो । दसैंको टीकाको दिन नै जुठा परेको घरमा दसैं कसरि मनाउन सकिएला र ?
विदेशमुखी वर्तमान र नेपालको दुर्दशा
जीवन बराल सङ्घर्ष मंसिर १३, २०७८
झण्डै २५० वर्षको विरासत रहेको राजपरिवार । जुन समय पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गरेका थिए । जुन समय बाइसे, चौबिसे…
खोट नियतमा छ, नियतिलाई दोष !
नगेन्द्रराज पौडेल मंसिर १२, २०७८
व्यवस्था भन्नु निर्जीव चिज हो, मानव अस्थिपञ्जरजस्तै । अस्थिपञ्जरमा हाड, छाला, रगत, मासुमात्र होइन, प्राण भरेपछि मात्र चलायमान हुन्छ ।…
कलममा अड्केको सत्य
रेशम शर्मा बस्ताकोटी मंसिर ९, २०७८
वर्तमानमा चारैतिर बेथिति र बेइमानीमात्र देखिएको छ । देशको सर्वोच्च अदालतमा मुक्कामुक्की भइरहेको छ । जनतामा जहाँसुकै बेथिति भए तापनि…
मुगादेवी सुवेदी मंसिर ८, २०७८
कुनै पनि कुरामा नियमविनियमदेखि बाहिर रहेर केही बढी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले खराब नियतबाट प्रभावित भई काम गर्नु नै ठगी हो…
स्थानीय तहको लागि कृषि योजनाको आवश्यकता र महत्व
पद्मकिरण राना कार्तिक ७, २०७८
पृष्ठभूमिः नेपालको संविधानले ३ तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । तीनै तहलाई एकल र साझा…